Shir-guddoonka Guurtida oo soo Bandhigaya Habsan Sanadeedkii Xildhibaanada | Somaliland Post
Home News Shir-guddoonka Guurtida oo soo Bandhigaya Habsan Sanadeedkii Xildhibaanada
Shir-guddoonka Guurtida oo soo Bandhigaya Habsan Sanadeedkii Xildhibaanada
Hargeysa (SLpost) – Shir-gudoonka Golaha Guurtidda Somaliland, ayaa sheegay inay dadweynaha iyo warbaahinta u soo bandhigi doonaan dhawaan Xildhibaanaddii fadhiyadda ugu badan ka maqnaa Golaha sannadkan sii dhammaanaya ee 2015-ka.
Gudoomiye ku-xigeenka Koowaad ee Guurtidda Md. Siciid Jaamac Cali, ayaa arrintaas ku soo qaaday hadal uu ka jeediyay furitaanka kal-fadhiga 58-aad ee Golaha Guurtidda oo shalay furmay.
“Waxa si rasmi ah innoogu furmay, kal-fadhigii 58-aad ee Golaha Guurtida, kal-fadhi cusub baa innoo bilaabmay sannadkuna waa dhammaad. Mudaneyaasha waxaan u sheegayaa in la sheegi doono habsan sannadkeedii xildhibaanada. Rag odayaal ah baynu nahaye waa in aynu soo dedaalnaa oo aynaan shaqada qaranka ka maqnaanin.Ajandihii berri (Maanta) ayaa la qaybinayaa,”ayuu yidhi Guddoomiye Ku-xigeenka koowaad ee Guurtiddu.
Geesta kale xildhibaan Maxamuud Xareed Rooble oo ka mida Mudaneyaasha aqalka Odayaasha, ayaa shacabka ugu baaqay in ay ku dedaalaan ilaalinta iyo adkaynta nabad-gelyada, isagoo arrimahaas ka hadlayayna waxa uu yidhi “Mandaqadan aynu ku nool nahay waxa ka jira dhibaatooyin badan oo xagga ammaanka ah. Markaa waxa loo baahan yahay in arrimahaas isha lagu hayo oo lagu dedaalo ilaalinta ammaanka iyo xasiloonida dalkeennu ku caano maalay.”
Xildhibaan Maxamuud Xarreed, mar uu ka hadlayay kal-fadhigan 58-aad ee ay guda galeen waxa uu yidhi “Waxa noo furmay ajandihii kal-fadhigii 58aad, kal-fadhi kasta oo Guurtidu yeelato waxa muhiimada koowaad leh arrimaha ammaanka, sidaa darteed, bulshada reer Somaliland waxaanu ku adkaynaynaa in ay ammaankooda ilaashadaaan.”
Fadhigan furitaanka kal-fadhiga 58aad ee aqalka odayaasha ayaa waxa ka soo xadiray badi xildhibaanda golahaas ayaa waxa la filayaa in fadhiga maanta xildhibaanda loo qaybiyo qoddobada ajandaha kal-fadhiga 58-aad ee u furmay, si ay dood iyo falayn-qeyn uga yeeshaan.